တရုတ် Culvert စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအတွက် Formwork ဖုတ်နိုင်သောပူဖောင်းများအတွက်ရော်ဘာပြွန် | Haohang
ပုံသဏ္Inာန်ဖောဖောပူဖောင်းများသည် Culvert အတွက်ရော်ဘာပြွန်
Culvert Pneumatic Rubber Balloon Pneumatic tubular ပုံစံကိုရော်ဘာနှင့်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းကိုအလွှာ (၃) ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် (၁ + ၂ = ၂ ရာဘာနှင့်ရာဘာထည်များ)
အဆုတ် tubular ပုံစံကိုသဘာဝရော်ဘာနှင့်ထည်မှပြုလုပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းကိုအလွှာ (၃ + ၁ = ၂ = ရာဘာနှင့် ၂ လွှာအလွှာ) ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အတွင်းပိုင်းအလွှာသည်ခိုင်ခံ့သောဒြပ်ထုပေါ်လီမာထည်ဖြစ်ပြီးကွန်ကရစ်နှင့်လေဖိအားများမှခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အပြင်ဘက်အလွှာသည်ရာဘာဖြစ်သည်။
ရော်ဘာတောင့်တင်းမှုသည် 65Shore A ခန့်ရှိပြီး၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်များဖြစ်သောနူးညံ့။ အကြမ်းခံ။ ၀ တ်ဆင်မှုကိုထိန်းထားနိုင်သည်။
သင်၏ကွန်ကရစ်ပြားကိုပိုထူပါက၎င်းကိုထည် ၂ ထပ်နှင့်ရာဘာ ၃ လွှာ (2 + 3) တွင်ထုတ်လုပ်သင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောပုံစံဖြင့် culvert balloon ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်အနေဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အချင်း: From0.2m 3m ရန်
စုစုပေါင်းအရှည်: 1m မှ 28m အထိ
ရော်ဘာပစ္စည်း၏ parameter သည်
အထူ၏မီလီမီတာ 3.2 ± 0.2
မာကျော (Shore A) 65 ± 5
ရာဘာနှင့်ထည်၏ကော်အားတင်းမာမှု၊ N / 25mm အွမ် ၈
ဆန့အစွမ်း, MPa ≥12
ချိုးမှာ elongation,% ≥350
300% Stretch set အရှည်, MPa 6
ပုံပျက်သောအချိုးအစားအတွက်ဆန့် ≤20% (ပုံပျက်မှုကိုကာကွယ်ပါ)
သင့်လျော်သောအပူချိန်၊ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် -10 ~ 80
အသွင်အပြင် အက်ကွဲခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိပူဖောင်းများမရှိခြင်း၊ အညစ်အကြေးလမ်းကြောင်း၏အရှည်သည် ၃ မီလီမီတာထက်မပို၊ အတိမ်အနက်မှာ ၁.၅ မီလီမီတာထက်မပိုပါ။ပုံပျက်သော 2mm ထက်မပိုပါ
၀.၂ မီတာမှ ၃ မီတာမှ ၁ အချင်း (ပတ်ပတ်လည်)
၂ စုစုပေါင်းအရှည် ၁ မှ ၂၈ မီတာ (အလှည့်ကျ)
Attn.Pls ကျွန်ုပ်တို့သည် Airbags ပြုလုပ်ရန်တာယာအထည်ကုန်ကြမ်းများဖြင့်သဘာဝရော်ဘာဖျာကိုတင်သွင်းသည်။
operating ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ ARD ဖောင်းရော်ဘာပူဖောင်း
ရော်ဘာဖွတ် mandrel အသုံးပြုခြင်း:
၁။ ဖောင်းသောဖောင်များကိုပုံသွင်း။ ဖိအားပေးနိုင်သောဖောင်ကိုသံမဏိအားဖြည့်ရန်လှောင်အိမ်ထဲသို့ထည့်ပြီးဒေါင်လိုက်အဆစ်များကိုအထက်သို့တင်ပါ။
mandrel များအတွက်ဖောင်းပွ Start
(၁) အဆို့ရှင်နှင့်လေထိုးနိုင်သောလေကိုဖွင့်ထားသောစာနယ်ဇင်းသို့ဖွင့်ပါ၊ ထို့နောက်အဆို့ရှင်ကိုပိတ်ပါ
(၂) အလုပ်လုပ်ကိုင်စာနယ်ဇင်း (စာရွက်တွင်ကြည့်ပါ)
(1) ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တုန်ခါတဲ့ကွန်ကရစ်အခါ inflatable mandrel အထက်သို့မျောပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်သင်တက်နှင့်ချ fix နှင့် buoyancy အပေါ်ကျော်လွှားရန်ပေါင်းသင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
(2) 50250mm mandrel အဘို့, ပုံမှန် stirrup အကွာ 80cm ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အချင်းတိုးလာလျှင်၊
(၂) နှစ်ဖက်လုံးမှမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းမြင့် plug-in တုန်ခါသောတုတ်များကိုတချိန်တည်းတွင်အသုံးပြုပါကတုန်ခါမှုများသည် mandrel ပတ်ပတ်လည်ရွေ့လျားခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်
(3) တုန်ခါလှံတံကြီးစွန်း mandrel ကိုပျက်စီးစေခြင်းနှင့်ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်လျှင်, mandrel မဆက်သွယ်နိုင်ပါ။
5. ကွန်ကရစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုခဲအဖြစ်ထို့နောက်လိုင်ကနေဓာတ်ငွေ့သွန်နိုင်သည့်, အတောင့ဆွဲထုတ်။
၆။ ဆေးကြောဆေးကိုစစ်ဆေးပါ၊ ဖိအားပေးပါ။ စစ်ဆေးပါ
A. အသုံးပြုပြီးနောက်, သင်သည်စင်ကြယ်သောရေစင်နှင့်အတူစင်ကြယ်စွာဆေးကြောဖို့လိုတယ်, အသုံးပြုရန်မလိုအပ်သည့်အခါ ကျေးဇူးပြု၍ Mandrel ကိုလေဝင်လေထွက်ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်သိုလှောင်ပါ။ ဆီ၊ အက်ဆစ်၊ အယ်ကာလီများနှင့်မထိပါစေနှင့်။
ခအစက်အပြောက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုနေစဉ်, ကျေးဇူးပြုပြီးချွန်ထက်သော Hard အရာဝတ္ထုများနှင့်ထိတွေ့မှုကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။
C. မှိုဖောင်းပွသောဖိနပ်မှထွက်သောအခါတိုင်း, စင်ကြယ်သောသန့်ရှင်းရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်အလို့ငှာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကွန်ကရစ်ကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ ဖြီး (နိုင်လွန်စုတ်ဖြင့်ပိုကောင်းသည်) နှင့်ရေလည်ပတ်သည်။
the အကယ်၍ Mandrel မှဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းများကိုဖယ်ရှားပေးပါက၊ ကြိတ်ဘီးကို သုံး၍ သင်လိုအပ်သောနေရာတွင် burnish ပြီးတံဆိပ်ခတ်ထားသည့်ကော်ကိုဖုံးရန်ကော်ကိုဖြုတ်နိုင်သည်။ ပျက်စီးသွားသောဖိုင်ဘာအမိုးအကာအတွက်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်တိပ်ခွေကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
culvert pneumatic ရော်ဘာပူဖောင်းကိုအသုံးပြုခြင်း
Q1 ။ ထုပ်ပိုးခြင်းရဲ့စည်းကမ်းချက်များကဘာလဲ။
A: ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပလပ်စတစ်အိတ်နှင့်အပြင်ဘက်ပုံးအတွင်း၌ထုပ်သည်။ သင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်မူပိုင်ခွင့်ရှိပါက,
Q2 ။ ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများမှာအဘယ်နည်း။
A: ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အောက်သာရှိသောအမှာစာမှာ၊ အပိုဝင်ငွေမပေးမီအပြည့်အဝပေးချေရလျှင်၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ထက်ပိုလျှင်၊ T / T ၃၀% ကိုအပ်ငွေအဖြစ်လိုအပ်သည်။ နှင့်မတိုင်မီ 70% ။ ထုတ်ကုန်များနှင့်ထုပ်ပိုးမှုများ၏ဓါတ်ပုံများကိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။ သင်ချိန်ခွင်မပေးမီ။
Q3 ။ သင့်ရဲ့ပေးပို့မှုစည်းကမ်းချက်များကဘာလဲ။
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU … .etc ။ အဓိကဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရအဓိကပါ။
Q4 ။ မင်းပို့တဲ့အချိန်ကောဘယ်လိုလဲ။
A: ယေဘူယျအားဖြင့်သင်၏ကြိုတင်ပေးငွေကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၁၀ မှ ၂၀ အထိကြာလိမ့်မည်။ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မည့်အချိန်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အရေအတွက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Q5 ။ သငျသညျနမူနာအညီထုတ်လုပ်နိုင်ပါသလား?
ဖြေ။ ။ မင်းရဲ့နမူနာတွေ၊ နည်းပညာရေးဆွဲမှုတွေနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မှိုများနှင့်လ်တာတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
Q6 ။ မင်းကဘာလဲနမူနာ မူဝါဒ?
A: ကျွန်ုပ်တို့တွင်သိုလှောင်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများရှိပါကအခမဲ့နမူနာကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ သို့သော်သင်နားလည်သောကြောင့်ဖောက်သည်များသည်курьерကိုပေးရသည်။
Q7 ။ ပစ္စည်းမပို့မီသင့်ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကိုစစ်ဆေးပါသလား။
A: ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့မပို့ခင် ၁၀၀% စမ်းသပ်မှုရှိတယ်။
ဖြေ ၁ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကျိုးခံစားရစေရန်အရည်အသွေးကောင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသည်။
၂။ ဖောက်သည်တိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေအဖြစ်လေးစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်နေရာမှပင်လာပါစေရိုးသားစွာစီးပွားရေးလုပ်ပြီးသူတို့နှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်သည်။
ရှေ့သို့ သင်္ဘောအကာအကွယ်အတွက် EVA ရေမြှုပ်အကာဖြည့်
တရုတ်ရော်ဘာအကာအရံ, Composite ပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရော်ဘာအကာအရံ, Tec သင်္ဘော, အဏ္ဏဝါလေအိတ်များ, လေယာဉ်အိတ်,